Ny fahitana ny fikarohana Afrikanina - AfricaArXiv
Ny fahitana amin'ny fikarohana afrikanina
By Johanssen Obanda, 8 volana 2 volana lasa izay
Resadresaka nifanaovana tamin'i Nicholas Outa avy amin'ny Maseno University, Kenya
Nicholas Outa, avy amin'ny Maseno University, Kenya, dia mpikaroka anaty rano miasa manatanteraka ny famenoana ireo banga amin'ny fikarohana ao amin'ny Freshwater Aquatic Systems, Fish Ecology ary Aquaculture.
By Johanssen Obanda, 10 volana 9 volana lasa izay
Resadresaka nifanaovana tamin'i Rania Mohamed avy amin'ny University of Khartoum, Sudan
Dr. Rania Baleela, avy amin'ny University of Khartoum, Sudan, dia biolojika molekiola pathogen miasa amin'ny famolavolana paikady fanaraha-maso ny areti-mifindra. Ity tafatafa ity dia manadihady ny asa fikarohana nataon'i Dr. Baleela, ny traikefany ary ny ezaka nataony tamin'ny fanabeazana ny vondrom-piarahamoniny amin'ny fiatrehana ireo zavamiaina misy poizina sy poizina.
By Johanssen Obanda & Priscilla Mensah, 11 volana 4 volana lasa izay
Resadresaka nifanaovana tamin'i Dr. Eduardo Oliveira avy amin'ny University of Louvain, Belzika
Ahoana no hanatsarana ny fitantanana ny rafitry ny tany sy ny faharetana amin'ny sisintany fampiasana tany? Inona ny synergie sy ny fifanakalozana eo amin'ny fanamby amin'ny fampiasana ny tany an-toerana sy ny tombontsoa manerantany ho an'ny tany? Topazo maso ny tafatafa nampahafantarina an'i Dr. Oliveira hahafantarana ny fikarohana nataony tamin'ny famaliana ireo fanontaniana ireo.
By Johanssen Obanda & Priscilla Mensah, 1 taona 4 volana lasa izay
By Johanssen Obanda, 2 taona 4 volana lasa izay